सर्जरी नगरी चिटिक्क स्तन – Holistic Monthly : A Leading Magazine for Health & Life Style
सर्जरी नगरी चिटिक्क स्तन
डा. रविन्द्र शर्मा ८ चैत, २०७६
महिलामा स्तनको महत्त्व मुख्यतः प्रजनन प्रक्रिया तथा स्तनपानसँग जोडिए तापनि यौन आकर्षण र सौन्दर्यसँग समेत यसको निकै ठूलो महत्त्व छ । सौन्दर्य प्रतियोगिताहरूमा होस् वा विपरीतलिङ्गीलाई आकर्षण गर्न होस्, महिला–सौन्दर्यतामा स्तनको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।
अध्ययनअनुसार महिला केही कडापनयुक्त र केही मात्रामा उठेको ‘टाइट’ स्तन चाहन्छन् । कसैलाई सानो स्तन ठूलो बनाउने इच्छा हुन्छ त कसैलाई भद्दा तथा झोलिएको ठूलो स्तनलाई सानो बनाउने चाहना हुन्छ । यस्ता चाहनाको सम्बोधनमा छालारोग तथा कस्मेटिक विशेÈज्ञ (सर्जन) को विशेष भूमिका रहन्छ ।
सामान्यतया सर्जरी (शरीरमा गरिने शल्यक्रिया) शतप्रतिशत जोखिमरहित हुँदैनन् । तसर्थ, चिकित्सा विज्ञानमा सर्जरीलाई प्रतिस्थापन गर्ने नयाँ–नयाँ प्रविधिहरू विकसित भइरहेका छन् । प्लास्टिक सर्जनहरूले गर्ने परम्परागत सर्जरीहरू धेरैजसो आक्रामक शैलीका (इन्भेसिभ) छन् । यस्ता सर्जरीहरू आक्रामक, न्यून–आक्रामक (मिनिमल्ली इन्भेसिभ) र आक्रामकरहित (नन्–इन्भेसिभ) किसिमका हुन्छन् ।
कुनै ब्लेड, चक्कु या अन्य हतियार (टुल्स–इक्विपमेन्ट्स) द्वारा चिरफार गरेर वा घाउ बनाएर गरिने आक्रामक शल्यक्रिया पद्धतिमा रगत बग्ने, घाउ पाक्ने, सङ्क्रमण फैलने, विभिन्न अङ्गहरूमा चोट पुग्ने, घाउ निको भएपछि पनि दागहरू देखिनेजस्ता जोखिम हुन्छन् । त्यसैले चिकित्सक तथा बिरामी दुवैले आजकल सर्जरीविनाका न्यून आक्रामक र आक्रामकरहित तरिकाहरू रुचाएका छन् । शल्यक्रियाविनै स्तन मिलाउन सकिने यस्ता विधिप्रति चिकित्सक तथा सेवाग्राही आकिर्षित भएको पाइन्छ ।
स्तनको सर्जरी रिकन्स्ट्रक्टिभ र कस्मेटिक्स सर्जरी गरी दुई किसिमले गर्न सकिन्छ । स्तनको क्यान्सर तथा कुनै चोटपटक या ट्युमर भएको अवस्थामा स्तनको रिकन्स्ट्रक्टिभ सर्जरी गरिन्छ । सुन्दरताका लागि भने कस्मेटिक्स सर्जरी गरिन्छ । स्तन बढाउन तथा घटाउन, ब्रेस्ट लिफ्ट गर्न र मिलेको आकारमा ल्याउनका लागि स्तनको कस्मेटिक्स सर्जरी गरिन्छ ।
स्तनका यस्ता विभिन्न प्रकारका सर्जरीहरू पनि परम्परागत आक्रामक शैलीबाट आक्रामकरहित शैलीमा परिवर्तित भैरहेका छन् । स्तनलाई मिलेको आकारमा ल्याउने परम्परागत पद्धतिलाई विस्थापित गर्न सक्ने विनाशल्यक्रियाको न्यून आक्रामक कस्मेटिक्स सर्जरी तथा उपचार पद्धतिबारेमा चर्चा गरौं–
शल्यक्रियाविना नै स्तनलाई ठूलो बनाउन, मिलेको आकारमा ल्याउन र उठाउन तथा भद्दा रूपमा झोलिएको स्नतलाई ‘टाइट’ गराउन सकिन्छ ।
किन झोलिन्छन् त स्तन ?
विभिन्न कारणले स्तन झोलिन्छन् । सामान्यतः स्तनपान गराइसकेपछि महिलाका स्तन झोलिन्छन् । कोलाजिन र इलास्टिन नामक प्रोटिनको कमीका कारण पनि स्तन झोलिन सक्छन् । हर्मोनको उतार–चढाव तथा गुरुत्वाकर्षणका कारण यस्तो हुन सक्छ ।
अत्यधिक मोटोपना तथा स्तनको आकार नै ठूलो भएको अवस्थामा पनि स्तन झोलिन पुग्छन् । सामान्यतया पोषण–तत्त्वको कमी, धेरै बच्चा जन्माएको अवस्था र रजस्वला बन्द भएका महिलाका स्तन झोलिन्छन् ।
किन गरिन्छ विनासर्जरीको ‘ब्रेस्ट लिफ्ट’ ?
ब्रेस्ट लिफ्ट मुख्यतः झोलिएको स्तनलाई तन्काउन, उठाउन र कडा बनाउन प्रयोग गरिने विधि हो । यो विधि अपनाउनुपूर्व स्तन तथा स्तनका तन्तु झोलिनुका कारण पत्ता लगाउनु आवश्यक हुन्छ । सर्जरीविना गरिने ब्रेस्ट लिफ्टका फाइदाहरू छन् । यो तुलनात्मकरूपमा सुरक्षित विधि हो ।
स्तन बाहिरबाट छाला नचिरी गरिने अत्यन्तै सानो सर्जरी हो ब्रेस्ट लिफ्ट । यो दीर्घकालीन परिणाम दिने भरपर्दो विधि हो । यो विधिमा सुरक्षित तथा न्यून वा आक्रामकरहित प्रविधिबाट स्तनको सर्जरी गर्न सकिन्छ । यो विधि अपनाएर सर्जरी गर्दा प्राकृतिक नतिजा देखिन्छ ।
यो विधिद्वारा सर्जरी गर्दा स्तन अनावश्यकरूपमा कडा पनि हुँदैन । यो विधि अपनाउँदा छोटो समयमै काम सम्पन्न गर्न सकिन्छ । ब्रेस्ट लिफ्ट विधि अपनाएर स्तनको सर्जरी गर्दा स्तनमा दाग देखिँदैन । त्यसैले पनि यो विधि प्रभावकारी र भरपर्दो छ । यो विधिमा विभिन्न किसिमका शल्यक्रिया गरी स्तनको आकार मिलाउन सकिन्छ ।
रेडियो फ्रिक्वेन्सी विधि
रेडियो फ्रिक्वेन्सी विधिबाट सर्जरी गर्दा आकार मिलाउन चाहेको स्तनका विभिन्न ठाउँमा सियोजस्ता साना र एकदम पातला क्यानुला सुरक्षित तरिकाले घुसारिन्छ । यो विधिमा स्तनको भित्रदेखि बाहिरैसम्म रेडियो फ्रिक्वेन्सीको शक्ति केन्द्रित गरेर स्तनका तन्तुहरू तताइन्छ ।
यो विधिमा स्तन मात्र लठ्याएर (लोकल एनेस्थेसियाबाट) स्तन मिलाइन्छ, प्यासेन्टलाई बेहोस पार्नु पर्दैन । त्यस्तो प्यासेन्ट उपचार गरेकै दिन आफ्नो नियमित काममा फर्कन सक्छन् ।
अत्यधिक झोलिएका स्तन भएका र ज्यादै मोटा प्यासेन्टका निम्ति भने यो विधि उपयुक्त नहुन सक्छ । उपचारको केही हप्तापछि मात्र यो विधिले काम गर्न सुरु गर्छ, सोचेजस्तो प्रतिफल पाउन तीन–चार महिना कुर्नैपर्ने हुन सक्छ ।
यो प्रविधिद्वारा स्तनलाई डेढदेखि पाँच सेमीसम्म माथि उठाउन सकिन्छ । यो विधि अपनाउँदा स्तनको छालाको कोलाजिन र इलास्टिन बढ्छ । यो विधिले छाला तथा छालाका तन्तु (लिगामेन्टहरू) लाई तन्काउन मद्दत गर्छ र छाला तन्कँदा आकार मिल्छ ।
लेजर ब्रेस्ट लिफ्ट
लेजर ब्रेस्ट लिफ्ट विधिमा ‘इर्बियम याग लेजर’ र ‘एनडी याग लेजर’ गरी दुई स्टेप प्रक्रियाबाट स्तनको आकार मिलाइन्छ । पहिले इर्बियम याग लेजर विधि अपनाएर स्तनको छाला तन्काइन्छ । त्यसपछि एनडी याग लेजर विधिद्वारा स्तनभित्रका तन्तुलाई हल्का तताइन्छ । यसरी स्तन खुम्चाउने र तन्काउने गर्दा स्तनलाई माथि उठाउन मद्दत पुग्छ ।
यो विधिले छालाको कोलाजिन र इलास्टिनको उत्पादनलाई बढाउँछ । यो सुरक्षित विधि हो र यसको प्रतिफल तुरुन्तै देखिन्छ । सुरुमा तीन हप्ताको अन्तरालमा तीन पटक यो विधि अपनाउनुपर्छ । त्यसपछि स्तनलाई आकारमा ल्याउनका लागि छ–छ महिनामा यो विधि अपनाउन सकिन्छ ।
हलिउड ब्रेस्ट लिफ्ट
स्तनको आकार मिलाउने हलिउड ब्रेस्ट लिफ्ट विधिमा विभिन्न चार किसिमका मिश्रित प्रक्रिया अपनाइन्छ । यसअन्तर्गत भ्याकुम लिफ्ट, माइक्रो करेन्ट पास गर्ने विधि, लाइटथेरापी (उपचार) र मसाजजस्ता प्रक्रिया अपनाएर स्तनको आकार मिलाइन्छ । यो नदुख्ने र सुरक्षित विधि हो । यसको साइड–इफेक्ट समेत हुँदैन ।
दुई हप्ताको अन्तरालमा तीनदेखि छ पटकसम्म यो विधि अपनाएर स्तनको आकार मिलाउन सकिन्छ । प्रभावकारी नतिजा प्राप्त गर्नका लागि भने समय–समयमा चिकित्सकसँग परामर्श गरी स्तन मिलाउनुपर्छ ।
एक पटक हलिउड ब्रेस्ट लिफ्ट गर्न करिव ४५ मिनेट लाग्छ । हलिउड ब्रेस्ट लिफ्ट गराउन चाहनेले २४ देखि ४८ घन्टा अघिदेखि कफी वा अल्कोहलजन्य पदार्थ सेवन गर्नु हुँदैन । र, उपचारपछि स्तनमा मिल्ने आकारको सपोर्टिभ (ब्रा) लगाउनुपर्छ ।
भ्याम्पायर ब्रेस्ट लिफ्ट
भ्याम्पायर ब्रेस्ट लिफ्ट विधि विशेषतः स्तन फुलाउन र कडा पार्न प्रयोग गरिन्छ । यो विधिले स्तनको चाउरीपन, घाउका दाग र छाला फुटेको दाग पनि कम गराउँछ । तर, झोलिएको स्तन मिलाउन भने यो विधि त्यति प्रभावकारी हुँदैन । स्तनलाई कप साइजको बनाउन पनि यो विधि प्रयोग गरिँदैन ।
यो विधिमा प्यासेन्टकै रगतलाई सेन्टीफ्युज मेसिनमा राखेर प्लेटलेट्स धेरै भएको प्लाज्मा (पीआरपी) निकालिन्छ । सो प्लाज्मालाई सुईको माध्यमबाट स्तनमा घुसाइन्छ । ‘ह्यालुरोनिक एसिड’ लाई फिल्लरसँग मिसाएर पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । यो विधिसँगै स्तनमा माइक्रो निडलिङ गर्न सकिन्छ । यो सुरक्षित प्रविधि हो ।
यो प्रविधिमा विभिन्न प्रकारका पग्लने धागोलाई सियोको सहायताले स्तनभित्र घुसारिन्छ । यसको इन्फ्लामेटरी रियाक्सनले कोलाजिन र इलास्टिनको मात्रा बढाउन सहयोग गर्छ र स्तनको आकार मिलाउन (ब्रेस्ट लिफ्ट गर्न) मद्दत पुग्छ ।
कम्प्युटरको सहायताले गरिने यो विधिमा मेसिनद्वारा सूक्ष्म करेन्ट अर्थात् स–सानो विद्युतीय तरङ्ग छालाबाट स्तनभित्र प्रेषण गरिन्छ । यसैमार्फत स्तनको आवरण, कडापन र टोनलाई मिलाइन्छ ।
स्तनको आकार मिलाउने यी विभिन्न किसिमका विधि बाहेक अन्य प्रविधिहरू पनि छन् । एलईडी लाइटथेरापी, लो लेभल लाइटथेरापी, आयोन म्याग्नमथेरापी जस्ता विधि अपनाएर पनि स्तनको आकार मिलाई स्तनको सुन्दरता बढाउन सकिन्छ ।
डा. शर्मा सिभिल अस्पतालका छाला तथा यौनरोग विशेषज्ञ हुन्